Fivarotana ny zaridainan'i Antaninarenina - Efa any amin'i Bianco ny dossier - TVM du 28 février 2019 - Madagascar : la corruption au sein de la Justice illustrée par les articles de presse
Accueil BIANCO Fivarotana ny zaridainan’i Antaninarenina – Efa any amin’i Bianco ny dossier –...
Miady amin’ny kolikoly ity eto Antananarivo. Nambarany tamin’izay famindram-pahefana izay fa eo ampelantanany ny antotan-taratasy mikasika ny fivarotana ny zaridaina etsy Antaninarenina. Nandrianina Razafindramaro – Cedric Razafindrakoto.
Manao fanadihadihana mikasika ny fitarainana momba ny famarotana ny zaridainan’Antanineranina ny biraom-paritry ny Bianco Antananarivo. Misy ny fanadihadihana efa vita ary nalefa eny anivon’ny fitsarana. Tsy maintsy misy tohiny ny fitarainana voaray.
Ny fitarainana voaray an, tsy maintsy tonga any amin’ny manampahefana izay manandrify azy, fa tsy misy raharaha mijanona izany ato na iray aza. Ny olana fotsiny eto, betsaka ireo raharaha mihantona nohon’ny tsy fahampiana araka olombelona, dia lasa azo lazaina hoe somary tara ihany ny fikarakaran’ny birao ilay rahahara.
Ankoatran’ny fandraisana sy fanadihadihana momba ny fitarainana, mametraka ireo aro-riaka, hiadiana amin’ny kolikoly eo anivon’ny sampan-draharaha miasa ho an’ny vahoaka ny Bianco Antananarivo. Minisitera sy fitantatanan-draharaham-panjakana 13 sy Commune 10 ato amin’ny Faritra Antananarivo no efa nametrahana rafitra miady amin’ny kolikoly. Na cellule anti-corruption. Nahitam-bokany izany.
Iarahantsika mahalala raha nivoaka teo ny ipc farany teo an, dia mbola ambany dia ambany ny teto Madagasikara, izany hoe mbola ambony be ny tahan’ny kolikoly eto, miasa izany isika, nanao fanentanana isika, nanao fanabeazana isika. Fa mbola tsy tena mahafa-po ny vokatra. Dikan’izay, mbola be ny tokony atao.
Araka ny fanadihadian’ny Bianco Antananarivo, efa mihamaro ireo olom-pirenena mamaky batsilana ny fanaovana kolikoly, mbola tsy mahafa-po nefa ny vokatra hoy ny Talem-paritra teo aloha nandritra ny fifampindram-pahefana teo aminy sy ny talem-paritra vaovao, Rakotondrainibe Seheno Malala. Fantatra teto ihany koa fa ankoatrany mpandraharaha Malagasy dia misy mpandraharaha vahiny atao fanadihadihana momba ny resaka kolikoly.
Article précédentRANDRIANASOLO Jacques nitsidika ny fonjan’i Tsiafahy, mbola betsaka ny tsy voatsara – TVM du 28 Février 2019
Article suivantFamerenana ny Hasin’ny Fitsarana no tarigetran’ireo nandrato fianarana tao amin’ny Ecole nationale de la magistrature à Madagascar – TVM du 28 février 2019